Ọnụ ọgụgụ ndị a kwesịrị imetụta echiche gị banyere ire ahịa ekwentị | Martech Zone
You budata ụdị nke Mobile App anyị kachasị ọhụrụ - iOS, android? Anyị ka na-arụ ọrụ na ịhazi ọdịnaya mana usoro ahụ dị, mana ọ gbalịsighi ike ịpụ ya n'ala ekele maka ịtụnanya mobile ngwa ụlọ nyiwe si Bluebridge!
Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu banyere ihe ndị puru ime! Anyị nwere nke anyị ahịa pọdkastị na anyị Mgbasa ozi usoro populating ngwa, oke! Anyị na-ebipụta ihe omume ma nwee ike izipu ọkwa nkwụsị.
Gịnị mere nke a ji dị oke mkpa? Ọ dị mma, lee anya na stats ahịa azụmaahịa 14 a Kahuna, a mobile ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu:
44% nke ndị America na-ekwu na ha enweghị ike ịme ya otu ụbọchị na-enweghị ngwaọrụ mkpanaka ha
Ndị ọrụ ekwentị ga - enweta 5.2 ijeri site na 2019
850 mobile ngwa ọdịnala na-ibudata ọ bụla nke abụọ si Apple App Store
45% nke email clicks dị na ngwaọrụ mkpanaka
Ndị ọrụ Smartphone na-enweta nkezi nke ngwa 26.7 kwa ọnwa
Enweela mmụba 345% YoY na ngwa ngwa mkpanaka
Afọ iri na ụma nke ndị ntorobịa na-etinye awa 6.3 kwa ụbọchị na ngwa mkpanaaka
50% nke puku afọ ebudatara ngwa ịzụ ahịa mkpanaka
59% uto na ndị na-eri ahụ mkpanaka, ndị na-ebupụta ngwa 60+ ugboro n'ụbọchị
US Ndị okenye 18-24 na-etinye nkezi nke 91 awa kwa ọnwa na ngwa mobiel
Ngwa ga-eji ọkara ndụ ha rụọ ọrụ na ọnwa isii mbụ
20% nke ego US niile akwụgoro Starbucks sitere na ekwentị
Ogologo Ntinye Ntinye Ntugharị: iOS bụ 51%, gam akporo bụ 86%
Ogologo njigide njigide nke ndị ahọrọ n'ime ọkwa ịkwa ụda bụ 2x
Ekwentị agbanweela ụwa. Ma ọ bụ ahụike, ịzụ ahịa, akụkọ, mgbasa ozi, mgbasa ozi ma ọ bụ egwuregwu, ama ama na-aghọ ihe dị oke mkpa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke ndụ. Ihe omuma ihe omuma a gha aghaputa uzo di nma maka ndi mara nma ndi nabatara uzo di nma.
Tags: email pịa-site ọnụego na mobileole ngwa kwa ọnwaole ndị ọrụ ekwentịojiji nke ngwa puku afọngwaọrụ mkpanakaahịa efustats ahia ahiaeji ire ahia ahiamobile push mobilema Ọkwainupụ ngosi njigidekpọbata ọkwasmartphonestarbucks
Data Ndị Ahịa I Kwesịrị Tradebe na ọdịnaya mmekọrịta gị